မြန်မာ-ထိုင်း အမှတ်(၂)ချစ်ကြည်ရေးတံတားကြီးဖွင့်လှစ် ၊ အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်?? - Yangon Media Group
မြန်မာ-ထိုင်း အမှတ်(၂)ချစ်ကြည်ရေးတံတားကြီးဖွင့်လှစ် ၊ အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်??
” ဒီတံတားကြီးပြီးစီးခဲ့တာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် နှစ်နိုင်ငံအလေး ထားမှုကို တွေ့မြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်အစိုးရနဲ့ ပြည်သူတွေပူး ပေါင်းမှုစွမ်းအားကြောင့် အခုလို တံတားကြီး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ် သလို နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းရဲ့ ပြယုဂ် တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ ထိုင်း နိုင်ငံကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေး စတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ၁၉၄၈ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၄ ရက်ကတည်းက နှစ် နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာနဲ့ ကာလ ကြာရှည်စွာရင်းနှီးမှုနဲ့ အိမ်နီးချင်း ကောင်းပီသမှု အပြန်အလှန်နား လည်မှုတို့ကို တန်ဖိုးထားထိန်း သိမ်းခဲ့ကြတဲ့ ထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုလို့လည်း ဆိုလို့ရပါ တယ်”ဟု နိုင်ငံတော်၏အတိုင် ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်းပြော ကြားခဲ့သည်။
'ပြောင်းလဲသွားတာတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် မပြောင်းလဲတာကတော့ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်ပရိသတ်တေ?
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာတို့ မဖြစ်မနေသုံးရမည့် အသုံးစရိတ်အတွက် ဖြည့်စွက